Ny ambany amin'ny fahitalavitra sy ny ohatra iray amin'ny fomba hanampian'ny tranonkala | Martech Zone
Ny ambany amin'ny fahitalavitra sy ny ohatra iray amin'ny fomba hanampiana ny tranonkala
Asabotsy Jolay 15, 2006 Talata, Jolay 4, 2017 Douglas Karr
Tamin'ity volana ity dia nahita ambany ambany vaovao ho an'ny mpijery fahitalavitra tambajotra isika. Tena nitsikera ny haino aman-jery mahazatra aho, nandany ny marketing nandritra ny folo taona voalohany. Misy mariky ny fiovana any an-kafa anefa. The Fantsona Sci Fi, ohatra, dia namoaka Online Pilot tato ho ato amin'ny sary miaina vaovao, Loha visy mahavariana. Izy ireo dia manambatra ny mpanamory fiaramanidina feno amin'ny fanadihadiana momba ilay seho. (Raha mahazo vintana ianao dia jereo ilay mpanamory fiaramanidina maharitra 22 minitra… sady mahavariana no manitikitika ahy, heveriko fa ho gaga anao amin'ny feo fantatrao ianao.)
Ity no dingana voalohany amin'ny fampiasana ny tranokala araka izay tratrany feno. Alao an-tsaina izany raha namoaka ny mpanamory rehetra azy ireo tamin'ny Internet ny tambajotra ary namela ireo olona hijery sy hifidy izay nahatonga azy io ho amin'ny vanim-potoana vaovao. Tsy mieritreritra ve ianao fa hihatsara ny kalitaon'ny fampisehoana sy ny fividianana mpividy? Izay raha ny hevitro! Na izany aza, misy ny mpitarika ao amin'ny indostria izay mino fa 'mahalala tsara kokoa' izy ireo ary fantatr'izy ireo izay ho tianao sy izaho. Hmmm, azo antoka.
Ahoana no nahitako momba ny The Amazing Screw-On Head? Mampihomehy, avy amin'ny Digg. Tranokala lehibe i Digg izay anateran'ny olona tantara ary avela hilaza raha "digg" ilay tantara izy ireo. Arakaraka ny isan'ny "digg" no avo kokoa ny lahatsoratra dia miakatra eo an-tampony. Ary koa, Digg dia manana endrika fiarahamonina, izay ahitako izay lahatsoratra 'digg' naman'ny namako. Fampiasana lehibe amin'ny Internet izany. Manantena aho fa afaka mianatra zavatra amin'izany ny fahitalavitra Network!
Tags: mahavariana lohaDiggscififahitalavitra
Inona no anaran'ny bilaogy?